Wasiirka batroolka Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed. [Xigashada Sawirka: Bloomberg]
Sanca-(Puntland Mirror) Jabhadda Xuutiyiinta dalka Yeman ayaa maamulka Somaliland uga digay qorshaha uu Isutaga Imaaraatka Carabta uu magaalada Berbera uga dhisanayo saldhiga milatari. Muuqaal baraha bulshada lasoo dhigay, ayaa Xuutiyiintu ku sheegeen haddii Somaliland aysan [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) 26 xubnood oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen gudaha Soomaaliya. Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ayaa bayaan ku sheegay in duqeyntu ay ka dhacday gobolka Hiiraan [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali iyo Wakiilka Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Michael Keating ayaa kulan ay ku yeesheen Garoowe uga wadahadlay colaada Tukaraq. Keating oo saxaafada la hadlay kulanka kadib [...]